Mmetụta nke Nkwakọ ngwaahịa na Ahịa Ecommerce gị? | Martech Zone
Mmetụta nke Nkwakọ ngwaahịa na Ahịa Ecommerce gị?
Friday, February 19, 2016 Tọzdee, Febụwarị 18, 2016 Douglas Karr
Otu n'ime nchịkọta ndị mbụ m meghere nke pụrụ iche bụ nke mbụ MacBookPro nke m zụtara. Ọ dị ka ọ bụ ihe na-ekpuchighị ka m meghere igbe ụdị akpa ahụ na laptọọpụ na ngwa ndị mara mma dị n'ime. Ọ bụ nnukwu ego, ị ga - ahụ nlekọta Apple na-elekọta iji jide n'aka na m matara na ọ dị iche ka m meghere igbe ahụ.
Otu onye mụ na ya na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n’ụlọ ọrụ na-eweta mma. O gosila m ụfọdụ ngwaahịa ha mezuru maka ndị ahịa ha nwere akpa, ịpịpịakọta, nkwakọ ngwaahịa na igbe ndị na-eri ọnụ ahịa dị mkpa karịa mmanụ ude ahụ dị n'ime. Ọ na - emekwa ọdịiche niile. Site n'iji nlezianya na-emepụta ma na-akwakọ ngwaahịa ahụ, ha na-enwe ike ịkwụ ụgwọ ihe ruru 4 ma ọ bụ 5 ugboro ọnụahịa nke ude anụ ahụ! Ha na-emezu ọtụtụ iri puku ngwaahịa kwa ụbọchị.
Anyị atụlewo ahụmịhe nke ịzụ ahịa ntakịrị ntakịrị, site na nchọpụta nke ikuku ịzụ ahịa ọtụtụ iri afọ gara aga ka Akwụkwọ Brian Solis na ahịa nnwale - azụmaahịa na-amalite ịmata nlọghachi na ahụmịhe.
Shorr Nkwakọ nyocha ọtụtụ narị ndị ahịa ahịa e-commerce na-anọchite anya ndị America. Ebumnuche bụ ịghọta ihe ndị na-amasị ndị ahịa n'ihe banyere nkwakọ ngwaahịa ọdịnala yana otu esi azụ ahịa na mmefu metụtara mmasị ndị ahụ. Isi ihe wepụrụ na nyocha ahụ bụ na adịchaghị ahịa (ndị ahịa na-eji ihe karịrị $ 200 kwa ọnwa) etinye uru bara uru na nhazi nkwakọ ngwaahịa.
Omenala nkwakọ ngwaahịa bụ ahụmịhe mbụ nke onye ahịa e-commerce nwere na akara gị, yabụ ọ dị mkpa ịme echiche mbụ dị mma.
Na nyocha ahụ, Shorr chọpụtara na naanị 11% nke ndị ahịa ecommerce nwere afọ ojuju kpamkpam na nkwakọ ngwaahịa ha natara taa. Shorr chọpụtara na ndị ahịa na-alaghachi azụ na-etinye nkezi nke 67% karịa ndị ahịa oge mbụ nke na-eme ka ọ dị mkpa na ọ dị mkpa ịme echiche mbụ na nkwakọ ngwaahịa gị.
Budata Nkwupụta Nkwakọ ngwaahịa Shorr
Ọ bụghị ihe niile gbasara omume ịzụta, ma. Mgbe ọ bụ ahụmịhe pụrụ iche, 37% nke ndị ahịa azụmaahịa kọọrọ ahụmịhe ahụ n'ịntanetị! Ezie na ọtụtụ nke n'ichepụta ụwa nwere ike lee nkwakọ ngwaahịa dị ka a dị mkpa arụmọrụ mmefu, ikekwe azụmahịa gị kwesịrị anya na omenala nkwakọ dị ka a marketing ntinye ego. Enwere otutu ohere maka mmelite - naanị 11% nke ndị na-azụ ahịa kwuru na ha nwere mmasị na nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa ha zụrụ.
Tags: atụmanya ndị ahịae-azụmahịa nkwakọecommercenkwakọ ngwaahịa ecommerceinfographicnkwakọadịchaghị ahịamkpumkpu
Ihe kpatara vidiyo vidiyo bụ ihe dị mkpa na ụdị 5 nke vidiyo Should Kwesịrị cemịpụta
Nkwadebe Data Talend: Mfe Dị Mfe, sachaa ma Kwadebe data CRM gị